သူငယ်ချင်း Archives - Focus Myanmar
သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်။ တံခါးကြီးဟာ အထဲကနေ ဖွင့်လို့ မရဘဲ အပြင်ကေ
အားမနာလျှာမကျိုးပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကသာ စိတ်ရင်းအမှန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ချိုချိုသာသာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းထက် ကိုယ့်အပေါ်အားမနာတမ်း ဒဲဒိုးပြောတတ် တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပိုရင်းနှီးနေမိလို့ အံ့သြနေပြီလား?
သိပ်အနိုင်ယူလွန်းတဲ့သူတွေက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရင်ကွဲပတ်လက် ကျန်ခဲ့ရတတ်တယ်..
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးတယ် ။ သူ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး အပေါ်မှာ သိပ်အနိုင်ယူလွန်းတာများ ဘေးကလူတောင် ဝင်တားရတာမျိုး အထိ။ရန်တွေ ဖြစ်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။ သူ့ ဘက်က စိတ်တွေ အရင်ဆိုး ၊ စိတ်တွေ အရင်ကောက်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာဟာ သင့်ခေါင်းပေါ်က ဆံပင် တွေလိုပါပဲ။ သင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ သူတို့တွေလည်း နည်းပါး လာပါလိမ့်မယ်။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ပြောစကားလိုပေါ့။ သင်မသေခင် သင့်မှာ သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန် ၅ ယောက်ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ သင်ဟာ သင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းများစွာကို ဆုံတွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းတွေထဲကမှ သင့်ဘေးမှာ တစ်သက်လုံးရှိနေဖို့ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၁၀ယောက်က ..
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
သဝန်တိုအောင် လုပ်ပြီး ဂရုစိုက်မှု ပြန်ယူနည်း
ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးဟာ နည်းနည်း စိမ်းလာပြီး အရင်လောက် နွေးထွေးမှုမရှိပဲ၊ချစ်သူရဲ့ စိတ်တွေ တခြား ကို ရောက်နေတယ်လို့ ခံစားနေ ရလား.?ဒါဆိုရင် တော့ ကိုယ့်အပေါ် အရင်လိုပဲ နွေးထွေးလာအောင် ချစ်သူရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ပြန်ရဖို့ ကြိုး စားရပါလိမ့်မယ်။
မနက်ပိုင်းထက် ညပိုင်းမှာ ပြုလုပ်တာက ပိုကောင်းသော အရာ ၁၂ခု
နက်ပိုင်းထက် ညပိုင်းမှာ ပြုလုပ်တာက ပိုကောင်းသော အရာ ၁၂ခုကို ဖော်ပြပါမယ်။
သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ထဲ နေတဲ့အချိန် ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်
၁။ တစ်ခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ အတင်းပြောတတ်ကြပါတယ်။ အခြားသူအကြောင်းထက် သူတို့ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူအကြောင်းကို အများဆုံး အတင်းပြောလေ့ရှိကြပါတယ်
၁၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့သမီးကို အရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား
အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာဟာ သူငယ်ချင်းရဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သမီးဖြစ်သူကို ချစ်မိခဲ့တာကြောင့် ဝေးလ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ၎င်းရဲ့အိမ်ကနေ ကလေးမုဒိမ်းကောင်လို့ နာမည်တပ်ပြီး မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။